Abavelisi besixhobo sokuvuna emva kwexesha,Uluhlu lwezixhobo zasemva kokuvunwa
Oomatshini beefama okanye oomatshini bezolimo luhlobo loomatshini ,isetyenziswa ekulimeni okanye kolunye uhlobo lwezolimo. Oomatshini bezolimo yinxalenye ebaluleke kakhulu yokondliwa kwehlabathi,zininzi iindlela zoomatshini basezi fama, ukusuka kwizixhobo ukuya kwizixhobo zamandla,njengeetrektara ,umntu olima isilima,umvuni,isithuba njl.
Baphuhliswa baba ziindidi ezahlukeneyo zoomatshini,Ngokwesiqhelo zahlulekile ukuba yiTrekta namandla,Umatshini wokulima umhlaba,Umatshini wokutyala,Ukuchumisa & Umatshini wokulawula izinambuzane,Umatshini wokunkcenkceshela,Veza iintlobo,Umatshini wokuvuna,Izixhobo zasemva kokuvuna,Hay wenza umatshini,njl.
Umatshini waseVictor fama ngumatshini ovelisa izixhobo zokuvuna emva kwexesha.umda wemveliso yakho ubandakanya umatshini wokukhula okuziinkozo ,umatshini wokugcina umbona ,umatshini wokucheba iperile ,Umatshini wokucoca iinkozo Umatshini womatshini womsebenzi ohlukeneyo onokunceda umlimi ukujongana nengqolowa,inokunceda umlimi ukuba afumane inzuzo engakumbi kunokuthengisa ingqolowa.
Uluhlu lwezixhobo zasemva kokuvunwa
1.Umatshini wokuqhubekisa umbona
Umatshini wokuxhuma umbona wokucima umbane uyacetyiswa xa kubhulwa umbona ngenxa yokuxhamla,njengokubhula okuphezulu,utyalomali olusezantsi, iindleko zokusebenza eziphantsi ,intshukumo elula ,Ukukhetha okuninzi kwamandla.Unezibonelelo ezongeziweyo zokufumana kunye kunye nokucoca ngaxeshanye, ezinokuphelisa ukungacoceki kokukhanya kwaye zilungelelanise amatye amancinci njl njl ,iyakwazi ukuqhutywa ngepetrol okanye ngenjini yedizili.umsebenzisi unokukhetha amavili amakhulu kwaye aphathe isakhelo ukuhambisa ngokulula.
2.Umatshini wokukhula wokuguba
Umatshini wokukhula kwengqolowa usetyenziselwa i-millet, isisu, iimbotyi zesoya, imbotyi encinci ,Umatshini wokubhula wombona ,Injini yedizili okanye injini yepetrol.umatshini wokucheba ukutya okuziinkozo unoluhlu olubanzi lokusebenzisa, imveliso ephezulu, inqanaba elaphukileyo eliphantsi, inqanaba lokulahleka okuphantsi, ukusebenza okusebenzayo kunye nokhuseleko njl.
4.Umatshini wokucoca iinkozo
Umatshini wokucoca umbane ococa iinkozo ungahlula umququ, uthuli,ilitye elincinci ukusuka kwingqolowa.umthamo osusela kumakhulu eekhilogm ngeyure ukuya kwiitoni ezininzi ngeyure. Lo matshini wokucoca iinkozo uluncedo kakhulu kwaye akuxhomekekanga kumoya wendalo..
5.Umatshini wokucheba iPeanut
Amandongomane akhula ngokubanzi kwiTropiki nakwiitropiki, zibalulekile kumvelisi omncinci kunye omkhulu wokuthengisa.Umatshini wokuhambisa isheltha luhlobo lwezixhobo zesivuno zangemva ezisetyenziselwa ukususa igobolondo kwaye ufumane imbewu yamantongomane ecocekileyo. I-HT yongcakazo lwethanga lezinto eziphambili ezikwisheltha ephezulu zisebenza ngokufanelekileyo, inqanaba elaphukileyo eliphantsi, umgangatho wokucoca ophezulu,ukungcola okungaphantsi,ngaphantsi kuxutywe neekhonkrithi, njl.
6.Umatshini wokuguba wengqolowa
Umatshini wokuguba wengqolowa zezona zixhobo zibalulekileyo ezisetyenziselwa umbona,ingqolowa ,irayisi ,ukugrumba iimbotyi ,inokusetyenzisa ekugayeni imifuno ,ezifana neelekese ebomvu, ipelepele emnyama, ipelepele emhlophe, isinamoni, yucca eyomileyo, iingcambu zecassava ezomileyo, kunye nekhadiomom, njl, Kwiintsuku ezidlulileyo,umgubo wengqolowa okanye umgubo wengqolowa yayingumhlaba kusetyenziswa izixhobo eziqhelekileyo zezandla ,idinga umzamo omkhulu kunye nexesha ,umatshini wokuguba wengqolowa unokunceda umlimi ekutyhafeni iintlobo ngeentlobo zeemicu.
7.Umatshini wokucheba ingca / umatshini wokukhuphela ingca
Umatshini wokucheba ingca obizwa ngokuba ngumatshini wokusika umququ, isetyenziswa ngokubanzi ukusika ingca, entsha okanye eyomileyo ingqolowa,alfalfa,ingca yengqolowa, ingca yerayisi,imitya yekotoni, ezinye izityalo, njl. Isiqu esisetyenzisiweyo sinokusetyenziselwa ukutya kweenkukhu. Umatshini wokucheba weplasta sisixhobo esifanelekileyo somlimi weenkukhu.,umntu omnye unokusebenzisa umatshini wokucheba ingca ukwenza uluhlu olubanzi lwezixhobo eziluhlaza.
kutheni sisebenzisa izixhobo zasemva kokuvuna ?
Abo matshini ngamacandelo nje amancinci ezinto ezisetyenziselwa ukuvuna,Umlimi kufuneka aqwalasele imisebenzi ethile yokulungisa okusanhlamvu ,njengokubhula, ukucoca, ukutywina,ukomisa, Ukuhlela,milling, njl ,Umlimi unokufumana inzuzo ephezulu kunengqolowa.
Ngokusebenzisa izixhobo zesivuno seposi ,umfuyi unokugcina iindleko ,ixesha kunye neendleko zabasebenzi.zifanele zizitshintshe zona zisuka kumlimi ziye kumvelisi wemveliso yezolimo ,ube lilungu elingaphezulu kwecandelo lokuhanjiswa kwezolimo .Ukufumana amaxabiso nembuyekezo ngakumbi ngexabiso lemveliso yezolimo,yonyusa ixabiso lweemveliso zakho kunye nosetyenziso olusebenzayo lweproducts.